DOWNLOAD DRIVERS MAKA ASUS K53S - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka ASUS K53S
Ozi ọ bụla e-mail na-enye onye ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ ya ndepụta zuru ezu nke ngwaọrụ maka ịrụ ọrụ nkịtị. Ọ dịghị ihe na Rambler. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ejiri otu igbe ozi igbe, ọ dị mfe iji ndị ahịa email mee ka ọ gbanwee ngwa ngwa n'etiti ọrụ.
Dezie onye ahịa gị maka Rambler Mail
Usoro nke ịmepụta onye ahịa email abụghị ihe mgbagwoju anya, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ nuances. E nwere ndị ahịa email dị iche, onye nke ọ bụla nwekwara àgwà nke ya. Mana tupu ịmepụta onye ahịa ahụ n'onwe ya:
Gaa na ntọala ozi. Iji mee nke a, na panel na ala nke ihuenyo anyị na-ahụ njikọ ahụ "Ntọala".
Gaa na ngalaba "Mmemme ozi" ma tinye mgba ọkụ na "Na".
Tinye captcha (ederede site n'onyinyo).
Ị nwere ike ịmalite ịhazi usoro ihe omume ahụ n'onwe ya.
Usoro 1: Microsoft Outlook
N'ikwu banyere email ahịa, onye nwere ike ọ bụghị naanị kwuru banyere Outlook si Redmond ibu. Ọ na-anọchi anya maka nchebe, nchedo na, ọ dị mwute ikwu, ọnụahịa dị elu nke puku rubles 8,000. Nke ahụ, Otú ọ dị, anaghị egbochi ọtụtụ ndị ọrụ gburugburu ụwa site na iji ya. Ụdị kachasị dị ugbu a bụ MS Outlook 2016 ma ọ ga-abụ ihe atụ nke ịtọlite.
Iji mee nke a, mee ihe ndị a:
Na windo nke usoro ihe omume ahụ, mepee taabụ ahụ "Njikwa".
Họrọ "Tinye akaụntụ" iji mepụta profaịlụ ọhụrụ.
Ọzọ, ịkwesịrị ịbanye data gị:
"Aha gị" - njirimara na aha ikpeazụ onye ọrụ ahụ;
Adreesị ozi-e - Adreesị ozi Rambler;
"Paswọdu" - paswọọdụ sitere na mail;
"Paswọdu weghachite" - gosi paswọọdụ site na ịbanye.
Na windo na-esote, lelee igbe ahụ "Gbanwee ntọala akaụntụ" wee pịa "Na-esote".
Anyị na-achọ ubi "Ozi Ntanetị". N'ebe a, ị ga-ahazi:
"Ụdị akaụntụ" - "IMAP".
"Na-abata ozi ihe nkesa" -imap.rambler.ru.
"Ntọala ozi ọpụpụ (SMTP)" -smtp.rambler.ru.
Pịa na "Emecha".
Ntọala ahụ zuru ezu, Outlook dị njikere iji.
Usoro 2: Mozilla Thunderbird
Onye ahịa email nke Mozilla bụ nhọrọ dị oke mma. Ọ nwere interface enyi na-arụ ọrụ ma hụ na nchekwa nke onye ọrụ data. Iji hazie ya:
Mgbe mbụ ị malitere, a na-atụ aro ịmepụta profaịlụ onye ọrụ. Push "Gbanwee nke a ma jiri mail dị m".
Ugbu a, na window ntọala ntọala, anyị kwupụtara:
Adreesị mail adreesị na Rambler.
Pịa na "Nọgidenụ n'ihu".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-achọ ịhọrọ ụdị ihe nkesa nke kachasị anabata ya. E nwere naanị mmadụ abụọ n'ime ha:
"IMAP" - A ga-echekwa data niile natara na ihe nkesa.
"POP3" - a ga-echekwa ozi niile e nwetara na PC.
Mgbe ị na-ahọpụta ihe nkesa, pịa "Emere". Ọ bụrụ na akọwapụtara data niile n'ụzọ ziri ezi, Thunderbird ga-ahazi ihe niile.
Usoro 3: Bat!
Bat! ọ dịkarịa ala karịa Thunderbird, ma nwere ihe ndọghachi azụ ya. Nke kachasị bụ ụgwọ nke 2000 rubles maka mbipụta Home. Ka o sina dị, ọ kwesịkwara ilebara anya, ebe ọ bụ na e nwere nnwere onwe mbipụta free. Iji hazie ya:
N'oge mbu, ị ga-akpali ịmepụta profaịlụ ọhụrụ. N'ebe a, ị ga-etinye data ndị a:
Ụlọ ozi igbe Rambler.
"Usoro": "IMAP ma ọ bụ Pop".
Ọzọ ịkwesịrị ịtọ ntọala maka ozi abata. N'ebe a, anyị ezipụta:
"Iji nata ozi iji": "Pop".
"Adreesị Nrụọrụ":pop.rambler.ru. Iji chọpụta nhazi, ị nwere ike pịa "Lelee". Ọ bụrụ na ozi gosipụtara "Nwale OK"ọ dị mma
Emetụla ndị fọdụrụ n'ime data ahụ aka, pịa "Na-esote". Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịkọwapụta njedebe nke ozi ọpụpụ. N'ebe a, ịchọrọ imeju ihe ndị a:
"Adreesị ọrụ maka ozi ọpụpụ":smtp.rambler.ru. A na-enyocha ezi data ahụ dị ka ozi na-abata.
Tinye akọrọ n'ihu "Ntuziaka SMTP m chọrọ nyocha".
N'otu aka ahụ, anyị anaghị emetụ ubi ndị ọzọ ma pịa "Na-esote". Na ọnọdụ a Bat! gafere.
Mgbe ha meziri onye ahịa ozi ahụ, onye ọrụ ahụ ga-enweta ohere ngwa ngwa na ọkwa ozugbo banyere ozi ọhụrụ na Rambler mail, na-enweghị mkpa iji gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke ọrụ ozi.